गुगल का ब्लगर का प्रयोगकर्ताहरुलाई खुशी को खबर छ । केही दिन अघि ब्लगर ले ब्लगलाई मोबाइल फ्रेन्डली बनाउने सुविधा थपेको छ ।
डेस्कटप र ल्यापटप हुँदै, इन्टरनेट मोबाइलमय हुँदै गएको समय मा, ब्लगर ले थपेको यो सुविधाले ब्लग का पाठकहरु अझै बढाउने कुरामा दुविधा छैन । अब मोबाइल फ्रेन्डली ब्लग का लागि, ब्लगर का प्रयोगकर्ताहरुले अन्य साइटहरुमा निर्भर हुनु नपर्ने स्थिति आएको छ । अब ब्लगर को सेटिङ बाट नै, ब्लग को लागि मोबाइल साइट बनाउन सकिन्छ ।
मोबाइल भर्सन कसरी बनाउने ?
हाललाई ब्लगलाई मोबाइल भर्सन बनाउने सुविधा ब्लगर ड्राफ्ट मा मात्र उपलब्ध छ ।
अत: यो सुविधा उपयोग गर्न को लागि ब्लगर ड्राफ्ट मा जानुहोस । ड्यासबोर्ड हुँदै सेटिङ मा जानुहोस् , त्यसपछि सेटिङ हुँदै इमेल र मोबाइल ट्याब मा जानुहोस् । [Dashboard > Settings > Email & Mobile tab] त्यस पेज मा माथि यही फोटो मा देखाए जसरी, Yes भन्ने अप्सन थिचेर मोबाइल प्रिभ्यु थिच्नुहोस्, तपाई को मोबाइल साइट तयार भयो ।
ब्लगर कै टेम्प्लेट मा ब्लग बनाइको छ भने, मोबाइल मा पनि त्यही थिम देखिनेछ भने गुगल एड राखिएको भए, एड पनि तल र माथि देखिने कुरा ब्लगर ले आफ्नो ब्लग मा उल्लेख गरेको छ । साथै, फरक टेम्प्लेट राखिएको छ भने, डिफल्ट थिम अर्थात सेतो व्याकग्राउन्ड मा ब्लग देखिनेछ । मोबाइल मा ब्लग निकै चाँडो लोड हुन्छ, यसमा कमेन्ट गर्ने सुविधा पनि रहेको छ । जोकोही ले सजिलै ब्लग मा कमेन्ट गर्न सक्नेछ ।
ब्लग को मोबाइल साइट को url यस्तो हुनेछ । http://aakarpost.blogspot.com/?m=1 अर्थात जोकोही ले जुनसुकै ब्लगस्पट लिंकहरुलाई मोबाइल फ्रेन्डली बनाएर ब्लगहरु हेर्न सक्ने छन् । url को पुच्छार मा ?m=1 ले मोबाइल भन्ने जनाउँछ ।
हाम्रो ब्लगहरु मोबाइल मा हेर्नुहोस् ।
Aakar Post : m.aakarpost.com
Aakar Tech : mtech.aakarpost.com
सायद एक साता भो होला आकार जी ! 22/23 December 2010 तिर हुनु पर्छ ! गुगल ले त्यसो गरेको -राम्रो कुरा हो ! मैले पनि हतार हतार (खुसि हुदै ) मोवाइल भर्सन टेम्प्लेट लाइ इनएवल गराएको थिए !
bro but mero blog ta dherai wota column bhako ani tabbed menu bhako chha. mobile version ma yes gareh pani mobile bata khulda ustai aucha.... kina??
ani... the description in meta tag comes at the front of the blog... even more, the title also comes at the front... can't get any solution for that... bro would you suggest me?